जबसम्म समाजमा डिभोर्स गर्ने महिलाहरु बढदैनन,तब सम्म महिलाहरु प्रतिको सम्मान र अधिकार बढ्दैन - Enepalese.com
नबिन बिक २०७८ माघ २ गते १८:२८ मा प्रकाशित
डिभोर्स शब्द सायदै कसैलाई प्रिय लाग्ला । सबै बिबाहित जोडीले डिभोर्सलाई एक एटम बम जसरी लिएका हुन्छन। जस्को घरमा डिभोर्स नामको बम खस्छ त्यो घर ध्वस्तै हुन्छ भनेर सबै जना तर्सिएका हुन्छन। समाजमा कसैले डिभोर्स गरेको थाहा पाए भने बिचराको पात्र बनाएर च्व… च्व…. च्व… गरेर सान्त्वना र दयाको भावनाले हेर्छन।
यो कहा जान्छे र यस्ले के नै गर्न सक्छे र भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिएको पुरुष प्रधान समाजको जालोलाई डिभोर्सरुपी बम हानेर ध्वस्तनबनाए सम्म महिलाहरु सधै पिडीता रहने छन।
डिभोर्स भनेको चिकित्सक बिज्ञानको एम्प्युटेट जस्तै हो। दुर्घटनामा परेको ब्यक्तिको समयमै हात वा खुट्टा काटेर फालेन भने पुराशरिरमा ईन्फेक्शन फैलिएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ।
महिलाहरुको हक र हितको सुनिश्चितता भएको अमेरिकामा तथा पश्चिमा देशहरुमा सन अमेरिकामा २०२१ मा ४५%, युकेमा ३३%, फ्रान्समा ५० %, क्यानाडामा ४०% ईटाली ४८% जोडीहरुको डिभोर्स भएको थियो।
आँसुको पोखरीमा डुबेर र ज्यानको बाजी लाएर घरको ईज्जत बचाउने ठेक्का छोरीहरुको मात्रै हो? आफ्नो प्राण भन्दा बाउ आमाकोईज्जत ठुलो ठानेर धेरै छोरी चेलीहरुको ज्यान अनाकहमा गएको छ।
मान सम्मान, हक अधिकार चुलो चौका र जुँठो भाँडा माझ्दैमा पाईदैन, आवाज उठाउनु पर्छ,लडनु पर्छ। नरोई, नकराई त आफ्नै आमाले पनि दुध ख्वाउदिनन। झन सदियौ देखी पुरुषहरुले राज गरेकोदेशमा त्यसै अधिकार पाईने दिवा स्वप्न नदेखे पनि हुन्छ।
जंगलको राजा मानिने सिंहलाई पनि सानै देखी चिडिया घरमा थुनेर राखेको भए सिंहले शिकार गर्न जान्दैन , सक्दैन, जंगलमा खुल्लाघुम्ने सिंहले के के गर्न सक्छ त्यो मैले यहा भनिरहन पर्दैनहोला। महिलाहरु भनेका चिडिया घर भित्र थुनिएका सिंहनी जस्तै हुन।
डिभोर्स भनेको चिकित्सक बिज्ञानको एम्प्युटेट जस्तै हो। दुर्घटनामा परेको ब्यक्तिको समयमै हात वा खुट्टा काटेर फालेन भने पुराशरिरमा ईन्फेक्शन फैलिएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ। त्यसरी नै बिग्रीएको वा थिचिएको सम्बन्धमा समयमा डिभोर्स गरिएन भने ज्यान जानुको साथै दुबै तिरको परिवारको सुख, शान्ती र खुशी तहस नहस हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।
नबिन बिक, चीन ( हाल अमेरीका)